नेकपा नेतृत्वमा विवाद : किन गोप्य राखियो प्रदेश कमिटीको नामावली ? | Alagdhar
घरBanner Newsनेकपा नेतृत्वमा विवाद : किन गोप्य राखियो प्रदेश कमिटीको नामावली ?
नेकपा नेतृत्वमा विवाद : किन गोप्य राखियो प्रदेश कमिटीको नामावली ?
काठमाडौं: गत बुधबार नेकपा सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकलगत्तै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए– प्रदेश कमिटीका सदस्यको नाम अनुमोदन भयो । उनले भने, ‘प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्छौ।’ चार दिन बित्दा पनि प्रवक्ता श्रेष्ठको भोलि आएको छैन।
प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्छौं भनेर पनि गुपचुप राखेपछि पार्टी पंक्तिभित्रैबाट नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। गत जेठ ३ गते एकीकरण घोषणा भएको सो पार्टीको प्रदेश, जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनका गतिविधि ठप्प छन् । पार्टी केन्द्रले भने दसैंतिहार र छठका अवसरमा एउटा चियापान गरेर सात महिना बिताएको छ।
सचिवालय बैठकले गत बुधबार प्रदेश कमिटीका सदस्यको नाम टुंगो लगाए पनि नेताहरूको भागबन्डा नमिल्दा सार्वजनिक नगरिएको स्रोतले बतायो। अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा महासचिव विष्णु पौडेलबीच नाम राख्ने र हटाउने क्रम नसकिएकाले ढिलाइ भएको हो ।
प्रदेश १ मा प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य, अध्यक्ष देवराज घिमिरे, सहइन्चार्ज सावित्रीकुमारी काफ्ले र सचिव सुरेशबहादुर राई छन् । त्यस्तै प्रदेश २ मा इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साह, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह र सचिवमा सुमन प्याकुरेल छन् भने प्रदेश ३ मा इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, अध्यक्ष हितमान शाक्य, सहइन्चार्ज नारायण दाहाल र सचिव सचिव आनन्द पोख्रेल तोकिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा भने इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भएका छन् । उनी यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत हुन् । यस प्रदेशका अध्यक्ष हितराज पाण्डे, सहइन्चार्ज खगराज अधिकारी र सचिव गोविन्द नेपाली छन् । त्यस्तै प्रदेश ५ मा इन्चार्ज शंकर पोख्रेल भएका छन् । उनी पनि यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत हुन् । यो प्रदेश अध्यक्ष ओनसरी घर्ती हुन् । सहइन्चार्ज दलबहादुर राना हुन् भने सचिव जगप्रसाद शर्मा छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सहइन्चार्ज यमलाल कँडेल र सचिव मायाप्रसाद शर्मा छन् । प्रदेश ७ मा इन्चार्ज भीम रावल छन् भने अध्यक्ष कर्ण थापा र सहइन्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी छन् ।
सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीका सदस्यको नाम टुंगो लगाए पनि नेताहरूको भागबन्डा नमिल्दा सार्वजनिक नगरिएको हो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलबीच नाम राख्ने र हटाउने क्रम नसकिएकाले ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो ।
प्रदेश कमिटीमा संख्याका हिसाबमा समेत ४५ र ५५ को सन्तुलन मिलाउने प्र्रयास भएको छ। जसअनुसार २०७ सदस्य १ नं प्रदेश कमिटीमा १ सय २२ पूर्वएमाले र ८५ पूर्वमाओवादीका सदस्य छन् । २१५ सदस्यीय प्रदेश २ मा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रलाई झन्डै हाराहारीमा बाँडिएको छ।
२ सय १७ सदस्य हुने प्रदेश ३ मा १ सय १६ पूर्व एमाले र बाँकी पूर्वमाओवादीलाई दिने निर्णय भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने नेकपाको १८९ सदस्य प्रदेश कमिटी रहनेछ । जसमा पूर्व एमालेबाट १०२ र पूर्वमाओवादीबाट ८७ सदस्य रहनेछन्।
प्रदेश ५ मा २०३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहने छ। जसमा पूर्वएमालेका १०५ र पूर्वमाओवादीका ९८ सदस्य रहने छन् । प्रदेश ६ मा भने १ सय ७५ प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमाले र माओवादी झन्डै हाराहारीको संख्यमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८३ सदस्य प्रदेश कमिटी रहनेछ। जसमा १ सय पूर्व एमाले र ८३ सदस्य पूर्ब माओवादी रहनेछन् ।
सचिवालयले केही समयअघि मापदण्ड परिमार्जन गरी पार्टीमा वरिष्ठताका आधारमा प्रदेश कमिटी टुंग्याउने जिम्मा ओली र दाहाललाई दिएको थियो। तर ओली र दाहालले आफ्नो अनुकूलता हरेर नै प्रदेश कमिटीको टुंगो लगाएको स्रोतले बतायो।
प्रदेश कमिटीको टुंगो लगाउन स्थायी समितिमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै नेकपाभित्र ठूलो असन्तुष्टि बढेको छ। सिस्टमका आधारमा एकताको निर्णय नगरी कम्पनी एकीकरणजस्तो गरेको आरोप नेतृत्वमाथि लागेको छ।
प्रदेश संगठन कमिटीको माथिल्लो जिम्मेवारीमा पूर्वएमालेबाट १५ जना र माओवादीबाट १३ जना नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नेकपाको प्रदेश संगठन कमिटीको नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी ओली नै हाबी देखिएका छन् । उनी निकट १० नेताले जिम्मेवारी पाएका छन् । इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका सत्यनारायण मण्डल, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल, सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका खगराज अधिकारी, अध्यक्षहरू क्रमशः देवराज घिमिरे, गोरखबहादुर बोगटी र कर्णबहादुर थापा, सचिवहरू क्रमशः आनन्दप्रसाद पोखरेल, गोविन्द नेपाली, सुमन प्याकुरेल अध्यक्ष ओली निकट हुन् ।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निकट ८ जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, सहइन्चार्ज हितबहादुर तामाङ, अध्यक्षहरू नारायण दाहाल, प्रभु शाह, हितराज पाण्डे र ओनसरी घर्ती तथा सचिवहरू सुरेश राई र जगप्रसाद शर्मा उनी निकट छन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल र भीम आचार्यले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । पूर्व एमालेतर्फ ओली र नेपालबाट ३÷३ जना इन्चार्ज भए पनि बाँकी नेतृत्वमा रहेका भने कोही पनि नेपाल निकट होइनन् ।
केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकट ४ जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम निकट दुई जना यमलाल कँडेल र दलबहादुर रानाले सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट विश्वनाथ शाहले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसैबीच प्रदेश कमिटी गठनका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाएका २१ केन्द्रीय सदस्यहरूले देशव्यापी अभियान चलाउने तयारी गरेका छन् । मंसिर पहिलो साता उनीहरूले ६ बुँदे माग राखेर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनीहरूले आफ्नो मागको बेवास्ता गरिएको भन्दै यस्तो तयारी गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।
अघिल्लो लेखमाकुमाल जातिको हेम्फै नाच जोगाउने प्रयास
अर्को लेखमाबलात्कारपछि फरार भारतीय नागरिक पक्राउ